फिल्मको लगानी महंगियो, कलाकार कति दोषी ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 08:55:10
जापानी समय : 12:10:10
फिल्मको लगानी महंगियो, कलाकार कति दोषी ?
13 June, 2019 15:56 | कला/मनोरन्जन | comments | 39750 Views
पछिल्लो समय नाम चलेका कलाकारले माग्ने पारिश्रमिकको उचाई माथि पुगेको महशुस सबैलाई नै भएको छ । अहिले २० देखि ५० लाखसम्मको पारिश्रमिक कलाकारले माग्ने गरेको कुरा स्पष्ट पनि छ ।
केही वर्ष अघिसम्म ७० लाखमा नेपाली सिनेमा नै बन्ने गर्थे । तर, अहिले यो लगानी कलाकारका लागि मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब, अरु काम सकेर सिनेमा हलसम्म ल्याउँदा के होला ? २ करोड त सामान्य रुपमा नै छुन्छ ।
यदि हो भने कलाकार किन अनावश्यक रुपमा महंगो भएका ? केही वर्ष पैसा कमाउँ, त्यसपछि जे होला होला भन्ने सोचले कलाकारिता गरेर पनि हुन्छ ? सिनेमा बनाउनेहरुको गुनासो छ, अहिले त सामान्य कलाकारको रेट पनि छुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ८–१० लाख त जस्ता कलाकारले पनि मागिदिन्छन् । अनी सिनेमा बनाउने कसरी ?
अहिले नेपाली सिनेमाको अवस्था धराशायी छ । यूट्युबमा चलेको आधारमा सिनेमा हलमा चल्दैन । हलमा चल्नका लागि धेरै कुराले फरक पार्नुपर्छ । तर, कलाकारको अर्थहिन डिमाण्डले सिनेमा क्षेत्रलाई नै मर्कामा पारेको छ । अब पनि कलाकारले पारिश्रमिकको बारेमा नसोच्ने हो भने निर्माताले लगानी नै गर्न सक्दैनन् ।
कि त सिनेमामा चर्को पारिश्रमिक लिएपछि त्यसलाई रिटर्न गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । होइन भने चर्को पारिश्रमिक मागेर निर्माताको ढाड सेक्न पाइदैन । कलाकारले यो विषयमा बुझ्न जरुरी छ ।